Ferroalloy Fekitori - Feng Erda Boka
Tengzhou Delifu Kukanda Zvekushandisa Co., Ltd., chikamu cheFENG ERDA GROUP. Iyo yakasimbiswa muna2009, kambani ine vashandi mazana matatu nemakumi matatu emutengo wegore negore wemamiriyoni mazana matanhatu nemakumi matanhatu. Kune mitsara mitanhatu yekugadzira otomatiki, zvigadzirwa zvikuru ndezvi: (chromium series GB3683-2008) high-carbon ferrochromium, low-carbon ferrochromium, micro-carbon ferrochromium, (manganese series GB3795-2006) high-carbon ferromanganese, medium-carbon ferromanganese , low-carbon ferromanganese, (inoculant system) ferrosilicon inoculant, silicon-barium inoculant, Silicon-Barium-calcium inoculant, (carbonizer system), coke-based kabhoni chinowedzera uye zvichingodaro.
Pedza kusvika pakukura
Ferroalloy yekugadzira mutsara
Mushure memakore anopfuura gumi ekuvandudza, yakave yakanakisa mutengesi wesimbi nesimbi indasitiri. Kunyanya mukugadzirwa kwemashizha esimbi esimbi uye zvikamu zvisina simbi, iyo Alloy Dep. "yakakwira chromium, yakaderera chromium, micro chromium" inoratidza ayo akasarudzika zvakanakira uye hunhu - yakagadzikana mhando, yakagadzika kuumbwa, yakakwira yekumwa mwero Muindastiri kuti umise mufananidzo wakanaka, tora mukurumbira wakanaka.
Nekuda kwekumanikidzwa kwemutengo, zvigadzirwa zvekugadzira zviri mu "Shizuishan City, Ningxia" uye "Baotou Guta, Inner Mongolia". Kuburikidza nekubatanidzwa uye kuwanikwa pamwe nekubatanidzwa, DELIFU CASTING yakagadzira kuita bhizinesi rekugadzira rakanakisa "nehunhu hwakanaka, kuchengetedzwa kwezvakatipoteredza, hukuru uye mhando yepamusoro". Nekubatsira kwepuratifomu uye simba rekambani, 85% yechromium uye manganese mbishi zvigadzirwa zvinotengeswa kubva kune anozivikanwa ekunze emabhizinesi emabhizinesi kuti ave nechokwadi chekugadzikana kweyakagadzirwa chigadzirwa uye mbishi zvinhu.